Window XP တင်တာမရလို့ ကူညီကြပါဦး — MYSTERY ZILLION
Window XP တင်တာမရလို့ ကူညီကြပါဦး
July 2011 edited July 2011 in Windows XP
Window7တင်ပြီးနောက် Window XP တင်တာမရလို့ ကူညီကြပါဦး.
စက်အမျိုးအစားက ကွန်းပက် အစုတ်က​လေးပါ။ ဝင်းဒိုးဆဲဗင်းတင်လိုက်ပါတယ်၊ပြီးနောက် ၁လလောက်သုံးပါတယ်။ ​နောက်ပိုင်းတင်လိုက်တဲ့ဝင်းဒိုးက တက်မလာ​တော့ဘူး၊အဲ့ဒါနဲ့ ဝင်းဒိုး အိတ်ချ်ပီ ပြန်တင်ဖို့လုပ်​တော့ မရဘူးဖြစ်​နေလို့ပါ. တင်တဲ့အခါမှာ​​တော့ ပါတီးရှင်း​တွေပေးထားတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပြီး ဝင်းဒိုးတင်ဖို့ enter ခေါက်တော့ ဒီလို Error တက်လာပါတယ်။
An Error occured while Setup was updating partition information on: 76317 MB Disk0at ID0on bus0on atapi (MBR).
Setup cannot continue. To quite Setup, press F3.
Windows7သွင်းထားပြီးရင် တခြား Windows တွေကို ထပ်သွင်းလို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ Windows ခွေနဲ့ Windows7ရှိတဲ့ Partition ကို FORMAT ချလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Boot တက်လို့ရတဲ့ partition ခွဲတဲ့ software တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီအပိုင်းကို နားမလည်လို့သေချာမရှင်းပြနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်တာကတော့ Ubuntu Installer CD ကို Boot တက်ပြီး သူ့ထဲက Partition Wizard နဲ့ပြန်လုပ်ပါတယ်။
Online မှာရှာကြည့်တော့ အစ်ကို့ပြဿနာကို ရေရေရာရာဖြေထားတဲ့သူ သိပ်မတွေ့ပါဘူး။ အဓိက စက်ထဲက Windows7ကို format ချနိုင်ရင် XP ကိုပြန်သွင်းလို့ရပါပြီ။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ အခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ Ubuntu installer CD ကို Boot ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ ရလို့ငြား လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ ကူညီပါဦး
Ubuntu အခွေရှိတယ်မဟုတ်လားအစ်ကို? ရှိရင် Windows ခွေတွေကို Boot တက်သလိုပဲ Boot တက်လိုက်ပါ။ Step by Step သူလုပ်ခိုင်းတာလေးတွေလုပ်သွားလိုက်ပါ။ Installation မရောက်ခင် Partition ရွေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့် Disk ကိုပြန်လည် ပြင်လို့ရပါတယ်။ ရှိပြီးသားတွေကို Delete လုပ်ပစ်လဲရပါတယ်။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလောက်ကြီးမခက်ပါဘူး။ နောက်ပြီး Ubuntu တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း 15mins မကြပါဘူး။ ခက်တာက သွင်းပြီးရင် Update လုပ်ဖို့ Internet Connection. ^^
p.s. ကျွန်တော်က အကြံပေးရုံသက်သက်ပဲပေးတာပါ။ ကျွန်တော်လဲ Partition ပိုင်းကို မကိုင်ရဲတာနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပဲလုပ်ခိုင်းနေရတာ။
windows7ကို ဘယ်လို Format (သို့)ပြန်ဖျက်လို့ရမလဲခင်ဗျာ. windows7 ကိုဖျက်လို့ရရင်တော့ XP တင်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်. format လုပ်နည်းလေးများအား ရေးသားကူညီပါခင်ဗျာ။
Hiren's Boot CD တစ်ချပ်၀ယ်ပြီး အဲဒါနဲ့ boot တက်လိုက်ပါ။ တစ်ခြား Live CD ဆိုလဲရပါတယ်။ ပြီရင် format ချတာတို့ partition ခွဲတာတို့ လုပ်လို့ရတာ ပါပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါအုံး။
I will write with english language because I don't know all unicode font.
insert window7Utimate disk and choose first boot derive. And then you will see loading the file like window. After finishing loading you will see all some window setup making. Do continuously, at last you will see partition box. Choose the partition and click format. It is formating by window7and restart. insert window XP and do installation.
At the first time , after formatting with XP CD , we may face the error that you told above . As for me , i formatted the system partition driver twice. the second part , the system information of window 7.., this partition may have about 100 MB ..format this partition drive and then install the window xp again .
ဒီအကိုက window7နဲ့ format လုပ်ပြီးတာနဲ့ restart ချပြီး xp တင်ခိုင်းတာလားမသိဘူး။ ရုံးမှာတော့ window7ကိုလူကြီးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲသုံးတော့ အဲဒီလိုမစမ်းဘူးပါ။ ကြုံခဲ့ရင် စမ်းလိုက် ပါဦးမည်။ ကျေးဇူးပါ။
Partition isalittle not easy for new user. Many file system option eg. NTFS, FAT, FAT32, HPFS. You should go computer centre check your computer. This mbr problem.
Repair the MBR by doing the following procedure and clean-out the registry errors with Reginout registry scanner.
3. Press F2 or Delete keys unless the BIOS Options appears.
a. First Boot Device: CD ROM
b. Second Boot Device: Hard Disk
5. Save your settings by pressing an appropriate key.
6. The system may restart again. Wait till the following message appears:
“Please press any key to boot from CD. . .”
8. Click the option Install Now.
10. Select the option Repair my computer | Command Prompt.
11. Enter the following commands one by one:
X: (Enter the name of your CD ROM Drive. Here, I used the X letter.)
12. At final, enter the EXIT command and press ENTER to quit.
13. Click Exit | Shutdown.
I think hard disk drive could get bad sectors and damage the MBR.
Hiren's Boot CD or Partition magic.
You should have some knowledge in A+